गण्डकी सरकार : प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्यांक राख्न आफ्नै डाटा सेन्टर बनाउदै -
गण्डकी सरकार : प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्यांक राख्न आफ्नै डाटा सेन्टर बनाउदै
कोरखबर ८ पौष, २०७८
पुस ८, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा महानगरपालिका–१७ ड्यामसाइडमा रहने गरी आफ्नै डाटा सेन्टर बनाउने भएको छ । डाटा सेन्टर स्थापनाको लागि गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
संघीय सरकारको पनि लागत रहने गरी डाटा सेन्टर निर्माण गर्न लागिएको प्रदेशको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म गण्डकी प्रदेशका सरकारी तथ्यांकहरू संघीय सरकारकै मातहतमा रहेका छन् । सेन्टरको स्थापना भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार र गण्डकीका ८५ वटै स्थानीय तहको तथ्यांक प्रदेशमै रहनेछ । मन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकार र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहको तथ्यांक सुरक्षित भण्डारणको लागि ‘एकीकृत तथ्यांक भण्डार’को स्थापना गर्न लागिएको बताए ।
प्रदेशको स्वामित्वमा जग्गा नभएका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनले बताए । डाटा सेन्टर स्थापना गर्न लागिएको जग्गाको स्वामित्व पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको रहेको छ । जग्गा प्राप्तिको लागि पोखरा महानगरसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खुबीराम पोखरेलका अनुसार जग्गाको स्वामित्व प्रदेशलाई प्राप्त हुँदा सामग्री खरिद प्रकृया समेत रोकिएको छ । जग्गाको लागि महानगरसँग छलफल सकिएपछि बाँकी काम अगाडि बढ्ने छ ।
मन्त्रालयकै उपसचिव हिमालचन्द्र अर्यालको संयोजकत्वमा नापी अधिकृत र मन्त्रालयकै शाखा अधिकृत सदस्य रहने गरी २०७७ असोज २० मा तीन सदस्यीय डाटा सेन्टर स्थापनाको लागि स्थान पहिचान कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदललाई १५ दिनको समय दिइएको थियो ।
२०७८ कात्तिक १ देखि कार्यदलले जग्गा छनोटको काम गरेपछि कात्तिक १२ मा मन्त्री थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनका अनुसार पोखरा–१७ मा रहेको कित्ता नम्बर ३५ को उत्तर र दक्षिणतर्फको २ हजार ५ सय ४३ वर्गमिटर जग्गा प्रयोग गर्न पाएमा डाटा सेन्टर स्थापनाको लागि समस्या हुने छैन ।
नियमित काम गर्न पाएमा एक वर्ष भित्र सेन्टरको स्थापना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री थापाले जग्गा नगरसभाबाट नै पारित हुनुपर्ने भएकाले जग्गाकै कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्ने बताएका छन् ।
एक करोड बढि डाउनलोड भयो ‘हाम्रो नेपाली किबोर्ड’ एप
वर्ल्डलिंकले भित्र्यायाे उच्चस्तरको इन्टरनेट सेवा !
पोल भाडा विवाद : इन्टरनेट र केबललाई छुट्टाछुट्टै शुल्क तोक्न सुझाव !
बक्यौता नतिरेपछि सुमार्गीको हेलो नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स खारेज !
सेटलाइटसम्बन्धी काम गर्न चार कम्पनी सर्टलिष्टमा छानिए !
ह्वाट्सएपले पनि थप्यो भाइबरमा जस्तै कम्युनिटी बनाउन सकिने फिचर !
फेसबुकले नाम मेटा राख्यो, , शेयर कारोबार हुने सिम्बल पनि फेरिने !
नागरिक एपबारे गुनासो भए टिपाउन सकिने !
इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा पुर्‍याइएको अवरोधप्रति क्यानको निन्दा !